Xasan Shiikh oo gaaray magaalada Jowhar si uu u furo shirka maamul u samaynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXasan Shiikh oo gaaray magaalada Jowhar si uu u furo shirka maamul u samaynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe
September 15, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo gaaray magaalada Jowhar. Sawirka: Twitter.
Jowhar-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Khamiis ah gaaray magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe.
Saraakiisha maamulka Shabeelaha Dhexe ayaa madaxweynaha ku qaabilay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar.
Xasan Shiikh ayaa si rasmiya u furay shirka maamul u samaynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo lagu hayo magaalada Jowhar.
Amaanka guud ee magaalada Jowhar ayaa aad loo adkeeyay.